MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Ngwe Moe Phyaing Phyaing MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT မှချစ်ခင်လေးစားရပါသော သုံးစွဲသူများကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် “ငွေမိုးဖြိုင်ဖြိုင်” Lucky Draw အစီအစဉ်ကြီးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ဒါ့ကြောင့် MPTနဲ့အတူအခုပဲ ကံစမ်းလိုက်ရအောင်
ငွေဖြည့်ရမည့်ပမာဏ(ကျပ်) ကံစမ်းခွင့်များ(USSD Channel မှတစ်ဆင့်) ကံစမ်းခွင့်များ(E top-up/ DMS/SDP စသည်တို့မှတစ်ဆင့်)
၁။ “ငွေမိုးဖြိုင်ဖြိုင်” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်က ဘာပါလဲ?
“ငွေမိုးဖြိုင်ဖြိုင်” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် ဆိုတာ MPT မှ MPT GSM/WCDMA Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့် Channel (USSD/ E-Topup/DMS/ SDP/MPT4U / Mobile Money) ဖြင့် မဆို ၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်လိုက်ရုံနဲ့ MPT Money ငွေသားဆုလက်ဆောင်များစွာကို ကံထူးရန် ကံစမ်းခွင့်များရရှိနိုင်မှာပါ။ ဖုန်းဘေလ်များများဖြည့်တိုင်း ကံစမ်းခွင့်များများရရှိနိုင်ပါတယ်။
၂။ “ငွေမိုးဖြိုင်ဖြိုင်” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ?
MPTအနေဖြင့် ဆုကံထူးရှင်များအား MPT၏ တရားဝင် Facebook Pageမှ တစ်ဆင့်ကြေညာ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကံထူးရှင်များအား ကံစမ်းထားသော အပတ်၏နောက် ၂ပတ်မြောက် အပတ် စနေနေ့တွင်ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ – သြဂုတ် (၂)ရက် မှ (၈)ရက် အတွင်း ကံစမ်းထားမှုများအတွက် ကံထူးသူများအား သြဂုတ်(၂၂)ရက်တွင် ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအား MPTမှ ဆက်သွယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်ကို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သည်။
၁၅။ ဖုန်းတစ်လုံးမှ အခြားဖုန်းတစ်လုံးသို့ ဖုန်းငွေဖြည့်ပေးခြင်းသည် “ငွေမိုးဖြိုင်ဖြိုင်” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသလား။
၁၆။ငွေလွှဲပြောင်း၍ ဖြည့်သွင်းခြင်း (Balance Transfer) ဖြင့် “ငွေမိုးဖြိုင်ဖြိုင်” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသလား။
မပါဝင်နိုင်ပါ။ ငွေလွှဲပြောင်း၍ ဖြည့်သွင်းခြင်း (Balance Transfer) ဖြင့် “ငွေမိုးဖြိုင်ဖြိုင်” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် မပါဝင်နိုင်ပါ။
ကံစမ်းမဲကာလမှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂) ရက်နေ့မှ (၁၅)ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပါသည်။